5 Kasị Omimi Places Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Kasị Omimi Places Na Europe
5 Kasị Omimi Places Na Europe
Njem ụgbọ oloko, Train Travel Austria, Ingbọ oloko na Belgium, Train Travel France, Train Travel Holland, Inzọ Njem Italytali, Train Travel The Netherlands, Zụọnụ Ndụmọdụ, Travel Europe
Oge Ọgụgụ: 6 nkeji
(Emelitere ikpeazụ On: 01/01/2020)
The European Afrika bụ onye jupụtara ọgaranya akụkọ ihe mere, ịrịba ama akụkọ, ahụmahụ, na mgbe ụfọdụ a omimi. Bụla nwere ya set nke mystifying ebe. Otú ọ dị, o yiri ka Europe nwere ụfọdụ n'ime ndị kasị ịtụnanya na omimi ebe n'ụwa. Mystery mgbe niile nwere-akpali adventurous njem. Ya mere, ọ na-abịa dị ka ọ na anya ihe mere ndị ọzọ obi kara njem ime ka ọ na ihe mgbaru ọsọ ha gaa ebe ndị a. Save A Train ka-etinye ọnụ a ndepụta nke ise kasị omimi ebe na Europe na na-n'aka itunanya na mmasị ọbụna ndị kasị ahụmahụ ndị njem.
1. Kasị Omimi Places Na The Netherlands – Giethoorn
Akpa ebe anyị nwere ike ikwu bụ omimi, nke pụtara na ọ bụ nnọọ ihe pụrụ iche. Ọ na-emi odude ke Netherlands na bụ ikekwe nnọọ otu n'ime ndị kasị obi ụtọ ebe ndị ị nwere ike ịga na. Giethoorn bụ a n'obodo nta ahụ ka mba ndị ọzọ. Ọtụtụ na-ewere ya dị ka ndị zuru okè getaway si oge a ndụ. Ọ dịghị ụzọ na o siri ike ọ bụla ndị mmadụ bi na ya. N'ezie, ọ bụ ụdị ebipụ ndị ọzọ nke Netherlands.
Anọkọ na Giethoorn ga-eme ka ị na-eche dị ka ọ bụrụ na ị na-ekpe ndị ụwa nke oge a na ya nsogbu kpam kpam. Oge ga-ofufe site, na ị ga na-eche kpamkpam gbasaghị. Dị ka na anya na obi na-adị nke obodo laa, ihe mbụ ị ga-achọpụta bụ otú obere na ọ bụ. Ị ga-achọpụta na e nwere nnọọ ole na ole ụzọ na-. N'ezie, a ga-enwe ụzọ ọzọ ọwa mmiri na ụgbọ mmiri agafe dị ka okporo ụzọ na njem. The ụlọ na obodo nta ga-enye gị ihe ochie ụwa vibe.
2. Eisriesenwelt Ice Abaitiat
Ọ bụrụ na ị chọpụta na ị na na Austria, ị ga na-eme atụmatụ na-eleta otu nke kasị ukwuu eke juru na-adị. Eisriesenwelt bụ otu n'ime ndị kasị ibu ice abaitiat na adị n'ụwa. N'ezie, mgbe sụgharịa na English, ọ pụtara World of Giants. N'itinyekwu n'ime nke a mma ọgba ga-eme ka ị na-eche dị ka ọ bụrụ na ị bụ na set nke ihe si n'ụwa ọzọ nkiri. E nwere ọtụtụ ihe ndị na-atụ n'anya banyere Eisriesenwelt.
Firstly, n'oké size nke ice ọgba onwe ya ga-ahapụ gị egwu. Na-aga site na ọ nwere ike na-ị dị ka otu awa na ọkara ka zuru ezu. Nke abuo, ime nke ọgba ga-ahapụ gị chilly na masịrị. The ọtụtụ ice ọgụgụ, ice ọkpụkpụ, na ice mgbidi bụ nnọọ nnukwu na-ahapụ ọtụtụ furu efu maka okwu. Ụfọdụ n'ime ndị a oke ice formations bụ toro ogologo karịa 20 mita! Na ọchịchịrị nke ọgba, na ice illuminated site magnesium oriọna uche “-abịa ndụ.” Dị ka ìhè na-aga site na ìhè na egwú na ndabere, n'echiche nke eke omimi ga-maa kụrụ ị. Na ngwụcha, onye ọ bụla nso Werfen, Austria kwesịrị iji oge gara Eisriesenwelt.
Salzburg na-Ụgbọ oloko
Munich itu Ụgbọ oloko
Innsbruck itu Ụgbọ oloko
Vienna na Werfen Ụgbọ oloko
3. Kasị Omimi Places Iji Gị Na Italy – Capuchin catacombs Of Palermo
The Capuchin catacombs nke Palermo nwere ike izipu a maajijiji ala gị spain. N'ihi obi ụtọ na-achọ na-enwe mmetụta nke ụjọ na nsọpụrụ, na catacombs bụ ebe dị mma nleta. Ndị a catacombs na-ekpuchiworị site morbidity na-omimi na-adị kwa ụbọchị nwoke. All ọ na-ewe bụ onye gara chọta onwe gị ese ụfọdụ nnukwu ndụ ajụjụ.
The akụkọ n'azụ Capuchin catacombs bụ nnọọ na-adọrọ mmasị. Ọ bụ ikpeazụ izu ike maka ebe foduru nke ọtụtụ puku ndị mmadụ si n'agbụrụ dị iche iche. Ihe ka ọtụtụ na catacombs bụ mọnk na ndị bara ọgaranya nke oge. Otú ọ dị, e nwere a ole na ole nkịtị folks e dị ka nke ọma. The catacomb erukwa n'okpuru a obibi ndị mọnk na ihe n'akụkụ ụka. Eje ije site na corridors nke catacombs, ị ga-ahụ ihe dị ka 8000 mummified ozu. Ụfọdụ n'ime ndị a bụ nnọọ agadi, ọbụna na-akpa azụ ka 1600s. The ozu na-gbasie ozu na ọma chebere. Na ngwụcha, dị ka na-eyi egwu dị ka catacombs iyi, ha a na-ewu ewu na-eleta eleta na na uru a nleta maka ndị na ike ya.
Marsala ka Palermo Ụgbọ oloko
Bagheria ka Palermo Ụgbọ oloko
Catania ka Palermo Ụgbọ oloko
Trapani ka Palermo Ụgbọ oloko
4. Chateau De Brissac
The Chateau de Brissac di na Ndida nke Angers, a obodo na Loire River Valley. Ọ bụ tallest nnukwu ụlọ na dum nke France. Nke a mara mma French nnukwu ụlọ e wughachiri na narị afọ nke 15 ma ọ lanahụ ule nke oge. Tupu ya ntaghari ohuru site Duke nke Brissac, ọ bụ a ochie nnukwu ụlọ na dere azụ ka narị afọ nke 11. Otú ọ dị, na Duke reconstructed ya n'ime a magburu Renaissance style nnukwu ụlọ.
Chateau de Brissac nwere ike iyi ka ihe nkịtị Chateau na mbụ. Otú ọ dị, n'azụ everyday facade, e nwere a omimi akụkọ na draịva ọtụtụ ileta ya. Ọtụtụ mọ akụkọ na-metụtara ihe mgbakwasị na chateau onwe ya. The kasị ewu ewu bụ akụkọ nke Green Lady. Dị ka akụkọ mgbe ọ e gburu nnukwu ụlọ ndusụk ini ke ufọt ufọt narị afọ nke 15. The Green Lady, ma ọ bụ dị ka ọ na-ewu ewu, na Green Lady, kwuru na-agagharị na nnukwu ụlọ ka. Ọtụtụ sịnụ ha hụrụ a nwaanyị na a green uwe na-eje ije site na ahịhịa ma ọ bụ guzo n'elu ụlọ elu. The ugbu a bi-ekwu na ha emewo agba nkịtị na ya, ma ọtụtụ ndị njem na e egwu. E wezụga ịhụ ya, ọtụtụ na-ekwu na i nwere ike ịnụ ya moans ofụri nnukwu ụlọ na n'oge awa nke ụtụtụ.
Paris na Le Mans Ụgbọ oloko
Nantes na Paris Ụgbọ oloko
Paris na Rennes Ụgbọ oloko
Rouen ka Paris Ụgbọ oloko
5. Kasị Omimi Places ileta na Belgium – Dinant
Dinant bụ ihe ọzọ na obere obodo na-akpali a echiche nke ihe omimi ka ọbịa. The obodo bụ na Namur n'ógbè Belgium. Ọ bụ zuru okè n'ebe na-aga ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ a izu ụka getaway si nnukwu obodo ndụ. The Nchikota nke obodo ndụ na gburugburu eke odida obodo a na-eyi. Ugwu na ndabere nke obodo jikọtara na osimiri Meuse eru site na obodo bụ iji nwee onye ọ bụla igba azụ na tụsaratụ. Ọ weghaara n'obi ọtụtụ ndị ọbịa na-eme ka ị na-eche dị ka ị na-na n'ụwa ọzọ.
Brussels ka Dinant Ụgbọ oloko
Antwerp ka Dinant Ụgbọ oloko
Ghent ka Dinant Ụgbọ oloko
Liège ka Dinant Ụgbọ oloko
Ị dị njikere ịhụ ọtụtụ omimi ebe Europe na-enye? Malite na ise a kasị omimi ebe na-ahụ ebe ụzọ na-ewe gị. Jide n'aka na-eme atụmatụ gị ezumike nke ọma ma na Book Train Tickets na oge na Save A Train!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “5 Kasị Omimi Places na Europe” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-mysterious-places-europe%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#ihe omimi #ebe omimi europetrains europetravel eurotrip trainjourney
Gịnị Bụ The Best National Parks Na Europe
Njem ụgbọ oloko, Ingbọ oloko na Belgium, Inzọ Njem Germany, Train Travel Norway, Train Travel Switzerland, Travel Europe
Mere Winter Train Travel na Italy bụ a ga-
12 Ụlọ mgbapụ kacha mma n'ụwa
12 Obodo kacha dị jụụ na Europe
10 Ebe kacha aga ebe ubi tenis
10 Ebe ezumike kacha mma nwere nnukwu ụlọ ikpe nkata
10 Ebe Njem Oge Oge Gburugburu Ụwa
Na -ezipụ ....